Tantara: Velona i Jesosy - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
FANTATRAO ve hoe iza io vehivavy io sy ireo lehilahy roa ireo? I Maria Magdalena naman’i Jesosy, ilay vehivavy. Ary ireo lehilahy miakanjo fotsy dia anjely. Ilay eﬁtrano kely izay jeren’i Maria ny ao anatiny dia ny toerana nametrahana ny fatin’i Jesosy taorian’ny nahafatesany.
Tamin’izay koa, ny vehivavy sasany naman’i Jesosy dia nitsidika ny fasana. Endrey ny hagagany nahita fa foana izany! Tampotampoka teo, dia nisy anjely roa niseho tamin’ny ﬁtaﬁana namirapiratra. ‘Nahoana ianareo no mitady an’i Jesosy eto?’, hoy ny fanontanian’izy ireo. ‘Efa natsangana izy. Mandehana haingana manambara izany amin’ny mpianany.’ Akory ny hafaingan’ny ﬁhazakazak’ireo vehivavy! Nefa teny an-dalana dia nisy lehilahy iray nanakana azy ireo. Fantatrao ve hoe iza io? I Jesosy io! ‘Andeha ilazao ny mpianatro’, hoy izy.
Ao amin’ilay ﬁtantarana momba ny ﬁtsanganan’i Jesosy tamin’ny maty, inona no manaporofo fa mihevitra ny vehivavy ho vavolombelona azo ianteherana i Jehovah? (Lioka 24:4, 9, 10; Matio 28:1-7)